University of Cambridge - Study in England. Top Jaamacada UK
gaabinta : UoC
aasaasay : 1209
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Cambridge
Qor at University of Cambridge
The University of Cambridge waa cilmi dadweynaha collegiate universityin Cambridge, England. aasaasay sannadkii 1209, Cambridge waa jaamacadda labaad ee ugu da'da weyn adduunka Ingiriiska ku hadla oo jaamacadda world'sfourth-ugu da'da weyn badbaaday ah.n Jaamacadda koray baxay urur culimada kuwaas oo ka tagay University of Oxford ka dib muran la xiriira dayidiisii. Labada jaamacadaha hore wadaagaan qaababka badan caadiga ah iyo waxaa badanaa loo wada jir ah sida “Oxbridge”.
Cambridge waxaa la aasaasay ka soo noocyo kala duwan oo ka mid ah hay'adaha oo 31 kulliyadaha dastuurka iyo in ka badan 100 waaxaha tacliimeed abaabulay lix dugsiyada. Cambridge University Press, waaxda ka mid ah jaamacadda, waa guri ee dunida ugu da'da weyn daabacaadda iyo saxaafadda jaamacadda labaad ee ugu weyn adduunka. Jaamacadda ayaa sidoo kale ka shaqeeya sideed matxafyada dhaqanka iyo sayniska, ay ka mid yihiin Museum Fitzwilliam ah, iyo beer Botanic. maktabadaha Cambridge ee qaban wadar ahaan ku xeeran 15 million buugaagta, sideed milyan oo ka mid ah oo ku yaal Maktabadda Jaamacadda Cambridge, maktabad deposit sharci.
Sannaddii dhamaaday 31 July 2015, jaamacadda lahaa dakhli guud ee £ 1,64 billion, kuwaas oo 397 milyan oo £ ahaa ka deeqaha cilmi-baarista iyo qandaraasyada. Jaamacadda dhexe iyo kulliyadaha leeyihiin hibeynta isku mid ah ku dhawaad ​​£ 5,89 billion, ugu weyn ee wax kasta oo universityoutside Maraykanka. Jaamacadda waxaa si dhow lala horumarinta kooxdu ganacsi farsmada sare ee loo yaqaan “Silicon biyagaleenka”. Waxaa uu xubin ka yahay ururo badan oo qayb ka mid ah “xagalka dahab ah” of keentay jaamacadaha Ingiriisi iyo Cambridge University Partners Caafimaadka, xarun sayniska caafimaadka tacliimeed.
Cambridge waxaa si joogta ah kaalinta sida mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican adduunka. Jaamacadda ayaa bartay Qalinjabiyeyaasha badan oo caan ah, oo ay ku jiraan xisaabyahannada qudbad, saynisyahano, siyaasiyiinta, qareennada, faylosuufiinta, qorayaasha, jilayaasha, iyo Madaxda shisheeye of State. laba-Sagaashan Laureates Nobel iyo toban biladaha Fields ayaa xiriir la leh Cambridge sida ardayda, awood, shaqaalaha ama Qalinjabiyeyaasha. Intii ay taariikhda, Jaamacada ayaa saftay suugaanta iyo farshaxanka shuqullada by qorayaasha badan oo ay ka mid yihiin Geoffrey Chaucer, E. M. Forster iyo C. P. Snow.
Iyadoo in ka badan 18,000 ardayda ka dhammaan qaybaha nolosha oo dhan geesood oo dunida, ku dhowaad 9,000 shaqaalaha, 31 Kulliyadaha iyo 150 Departments, Caqlina, Dugsiyada iyo machadyada kale ee, ma laba maalmood abid la mid yihiin kuwa ka dhiga jaamacadda Cambridge.
At qalbiga midow ah Departments, Dugsiyada, Kulliyadaha iyo Kulliyadaha waa koox maamulka dhexe. Waa yar sababtoo ah Kulliyadaha waa is-maamula iyo shaqaalaha cilmiga fuliyaan inta badan maamulka maalinlaha ah ee Cambridge.
University waa midow ah ee Dugsiyada, Caqlina, Departments iyo Kulliyadaha. Kulliyadaha waxaa maamulaa qaynuunnadayda iyo xeerarka u gaarka ah ee ay, laakiin waa lagama maarmaan si ay suurto-gal ah University of Cambridge.
Ardayda ku nool, cuno iyo bulsho ee mid ka mid ah University ee 31 goboleedka Colleges. Affarta heli supervisions College - fadhiyada cilmiga koox yar - arkaa mid ka mid ah lagu daydo cilmiga adduunka ugu fiican.
College kasta wuxuu leeyahay nidaamka ay gudaha u gaar ah. Waxay doortaan ardayda iyaga u gaar ah, ku xiran sharciyada University, iyo ugu galiyo ardayda postgraduate undergraduate iyo labada. wakiilada College fadhiistaan ​​Guddiga Council iyo Maaliyadda Jaamacadda.
Waxaa jira lix Dugsiyada, oo mid kasta u sameeyaan isutagga maamulka kulliyadaha iyo hay'adaha kale. Waxay yihiin: Arts oo Humanities, Biological Sciences, Daawo Clinical, Humanities iyo cilmiga bulshada, Physical Sciences, iyo Technology.
Waxaa jira Golaha a of School kasta - oo ay ku jiraan wakiillo ka kulliyadood iyo Departments ay. Dugsiyada waxaa wakiil on Guddiga Guud.
Kulliyadaha iyo Departments
University kulliyadood abaabulo cilmiga iyo cilmi maadooyinka shaqsi ama koox ka mid ah maaddooyinka. Shaqadooda waxaa sida caadiga ah waxay u qaybsan sub-u Departments.
Xarumaha waxbarashada waxaa ay gacanta ku guddiyada maareynta, isu keeno wakiillo ka socda dhowr nidaamo.
Kuliyada Architecture iyo History of Art
Kuliyada Asian iyo Dhexe Studies Bari
Department of East Studies Asian
Waaxda Dhexe Studies Bari
Museum of Qadiimiga Qadiimiga ah
Department of Anglo-Saxon, Norse iyo Celtic
Kuliyada Modern iyo Qarniyadii Languages
Department of German & Holland
Department of Talyaani
Department of Studies Slavonic
Department of Spain iyo Portugal
Department of af iyo qoraal Applied Luuqadaha
Centre for Research in Arts, Humanities iyo cilmiga bulshada
Kuliyada Human, Cilmiga Bulshada iyo Siyaasadda (HSPS)
Department of Qadiimiga iyo Anthropology:
Leverhulme Centre for Human Studies Evolutionary
Mongoliyaan iyo Inner Studies Unit Asian
Museum of Qadiimiga & Anthropology
McDonald Institute for Research Ciidanka Booliisku
Department of Politics iyo International Studies:
Xarunta Daraasaadka Afrika
Xarunta Daraasaadka Horumarinta
Xarunta Daraasaadka Gender
Taariikhda iyo Philosophy of Science:
Centre for Research Qoyska
Physiology, Horumarinta iyo Neuroscience
Museum of cilmi barasho xayawaan
Wellcome Trust Centre for Research Stem Cell
Xarunta Biology Cambridge Systems (CSBC)
Kulliyadda Earth Sciences & Juqraafiga
Scott Polar Machadka Cilmi-
Museum Polar The
Applied Xisaabta iyo Physics teori
Xisaabta daahir ah oo Xisaabeed Statistics
Kuliyada Physics & Chemistry
Qalabka Science iyo Metallurgy
Isaac Newton Institute Xisaabeed Sciences
Kiimikada noole Clinical
Cambridge Centre for Repair Maskaxda
Wolfson Brain sawirka Centre
daawo lagu shubo
Tijaabooyin Medicine iyo Immunotherapeutics (dhaadheer)
unit khariidaynta Maskaxda
Caafimaadka Dadweynaha & Daryeelka Aasaasiga ah
General Practice & Research Daryeelka Aasaasiga ah
Qaxarka iyo Qalliinka Lafaha
Cambridge Institute for Research Medical (CIMR)
Energy, Farsamoyaqaan dheecaanka, iyo turbomachinery
Farsamoyaqaan, qalabka iyo design
Warshadaha iyo maamulka
Kuliyada Business & Management
Centre for Research Business
Xarunta Psychometrics The
Kuliyadda Sayniska Kombiyuutarka & Technology
Department of Chemical Engineering & bayotechnoolajiyadda
Cambridge Institute for Leadership Sustainability
Hay'adaha madax-bannaan ee School kasta
Xarunta Daraasaadka Islaamka
Adeegyada Macluumaadka University
The University of Cambridge waa hodan ku ah taariikhda – caanka ah dhismayaasha ay Kulliyadaha iyo University jiidan kooxda martida ka ah adduunka oo dhan. Laakiin matxafyada iyo ururinta Jaamacadda ayaa sidoo kale qaban khasnadihii badan oo ku siin aragti xiiso galay qaar ka mid ah hawlaha scholarly, labada ee la soo dhaafay iyo hadiyad, of aqoonyahano iyo ardayda Jaamacadda ee.
The University of Cambridge waa mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ee ugu da'da weyn iyo xarumaha tacliinta keentay, iyo bulshada is-maamulo ee culimada ah. Its sumcad for guulaha waxbarasho fiican waa yaqaan caalamka oo dhan oo ka turjumaya guusha aqooneed ee ardayda, iyo sidoo kale cilmi-heer caalami ah asalka ah ay fuliyeen by shaqaalaha ee Jaamacadda iyo Kulliyadaha ah.
Qaar badan oo ka mid ah caadooyinkii University iyo Eray aan caadi ahayn la ogan karo in xididada ee sannadaha hore ee taariikhda dheer ee University ee, iyo buug-yarahan u muuqataa in ay la soo dhaafay si aad u hesho asalka ah ee u badan in ay tahay kala ee University of maanta.
Marka hore waxaan soo gaarto Cambridge ee diiwaanka ku qoran, waxaa horey u ahayd magaalo badan. Buundada guud Cam River ama Granta, kaas oo magaalada qaaday magaceeda, ayaa jiray tan iyo ugu yaraan 875. Magaalada waxay ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah ka hor sahanka Domesday la ururiyey in 1086, by kaas oo markii qalcaddii ku saabsan dhulka iyo dhicidda ka taagnaa ilaa xagga woqooyi ee buundada, oo halkaas hore u joogay taaban karo guryaha ganacsiga iyo la deggan yahay iyo sidoo kale dhowr kaniisado ku yaalla dejinta ugu weyn oo koonfurta jiifay ee buundada.
magaalada gudahood, ama aad ugu dhow in ay, waxaa jiray dhowr ah oo hay'adaha kale ee diinta. Waxaa jiray Buzadag ee Church of St Giles hoos qalcaddii hor 1112, markay u dhaqaaqay goobta cusub ee guud ahaan Cam River ee Barnwell, iyo Convent of St Radegund soo jirey tan iyo 1135 on goobta taasoo ugu danbeyn noqday Ciise College. Oo waxaa kaloo jiray labo isbitaal, mid loogu talagalay oo baras at Stourbridge, oo labaad a, aasaasay paupers oo heegan u ah St John, taas oo ka dib 1200 degan goobta halkaas oo St John ayaa College hadda taagan. Todoba iyo toban miles waqooyi ka xigta magaalada ahayd daarta weyn Benedictine of Ely oo, ka dib 1109, waxaa yiil kursigii Bishopric a.
Waxaa jiray sidaas badan in ay keenaan karaaniyaal (kirishtaan) magaalada, laakiin ganacsatada ayaa sidoo kale soo jiitay in ay. Ka dib markii ku saabsan 1100 lagu gaadhi karo Cambridge si fudud by nidaamka webiga kaas oo lagaga miiro oo dhan East Midlands ah, iyo iyada oo loo marayo Lynn iyo Ely, waxay lahaayeen in ay helaan badda. Xoolo badan ururay magaalada, iyo kow iyo toban ka badbaaday kaniisadaha kaniisadda Dr Makumbe oo ugu yaraan hal guri dhagax qurxoon sii caddayn of this. Waxaa jiray suuqyada cuntada ka hor 1066, iyo inta lagu jiro qarnigii tobnaad sooro of St Radegund loo ogolaaday in ay qotomiyey cadaalad ah dalkoodii ugu Garlic Lane; ka Buzadag ah Barnwell lahaa cadaalad ah June (ka dib midsommar Fair), iyo isbitaalka kii baraska qabi jiray ayaa la siiyey xaq u leeyihiin inay qabtaan cadaalad ah oo hormaray Stourbridge Fair si fiican u yaqaan oo muddo dheer.
by 1200, Cambridge ahaa bulsho oo kobcaya oo ganacsi kaas oo sidoo kale ahaa magaalada gobolka ah iyo ugu yaraan hal dugsi ee kala soocin qaar ka mid ah. Markaasuu, in 1209, culimada qaadashada magan ka eryaa colaadeed ee Oxford u guureen Cambridge oo halkaas ayay degeen. Marka ugu horeysa ay ku noolaayeen ee hoygeeda magaalada, laakiinse wakhtigii guryaha ayaa la soo kiraystay sida hostels la Master ah mas'uul ka ah ardayda. by 1226 culimada waxay ahaayeen tiro badan oo ku filan si ay u qotomiyey urur, wakiil rasmi ah oo u yeedhay Chancellor a, iyo u muuqdaan in ay u diyaarinay koorsooyinka caadiga ah ee waxbarasho, baray by xubno iyaga u gaar ah. Laga soo bilaabo bilowgii waxaa jiray khilaaf u dhexeeya magaalada iyo ardayda. Ardayda, inta badan da'doodu u ah oo ku saabsan afar iyo toban ama shan iyo toban, rabshooyin badanaa keena; muwaadiniinta magaalada, dhanka kale, ayaa lagu yaqaan inay culaysiyo qolalka iyo cunto. King Henry III qaatay culimada ku hoos uu difaac sida ugu 1231 oo qorsheysay in iyaga la da'da ah ka miirashada by kireeya ay. Isla mar ahaantaana waxa uu isku dayay si loo hubiyo in ay lahaayeen haysto ka mid ah cilmiga, by amar in kaliya kuwa ku qoran hoos waxbarashada ee Masterka aqoonsan ahaayeen in la ogol yahay in ay sii magaalada.
The ardayda, awelna loola Cambridge ugu dhakhsaha badan loo qabanqaabiyaa ay nidaamka waxbarasho ka dib markii hannaankii oo caadi ayuu iska noqday in Italy iyo France, iyo wixii ay u ogaan lahaa in Oxford. Waxay ugu horeysay bartay waxa lahaa haatan lagu yaqaan Dabcan aasaas '’ farshaxanka – naxwaha, macquulka ah iyo cod karsanaa – raaceen ka dib by xisaabta, music, joomateri iyo xiddigaha, taasoo keentay in ugu darajo ah bachelor iyo sayidkiisa. Waxaa jiray Professor lahayn; cilmiga la sameeyay by sayid oo mar hore ku dhex maray koorsada iyo kuwa la ansixiyey ama shati by jidhka oo dhan jaalkooda (koleejka ama jaamacadda). Waxbarashada qaaday qaab akhriska iyo qoraalka sharxaya; baaritaanada waxay ahaayeen disputations afka taas oo musharaxiinta hormartay su'aalo taxane ah ama theses oo ay muransan yahay ama la murmay soo horjeeda wax yar sare naftooda, iyo ugu dambayntii la sayidyadooda ka mid ahaa oo wuxuu dadkii baray. Qaar ka mid ah sayidyadiinna ah, laakiin by lahayn oo dhan waxay ka dhigan tahay, socdeen inay waxbarashada sare ee ilaahnimadiisa, xeerkoodu iyo sharciga madaniga ah, iyo, dheeraad ah oo ku dhif, daawo, kaas oo baray oo baaro si la mid ah kuwii hore u dhex maray iyo koorsada noqday dhakhaatiirta. Dhakhaatiirtu waxay naftooda u qaybsamaan kulliyadood gaar ah.
Waxay ugu dhakhsaha badan u noqday lagama maarmaan, si looga fogaado in xadgudub ah mudnaanta boqornimada shirka on culimada, si ay u aqoonsadaan iyo sugee dadka Ruuxaan darajo la siiyey. Qoridda la sayidkiisa shati ahaa tallaabada ugu horraysa ee this; waxaa la odhan jiray dugsiga sare sababtoo ah shardi ah in magaca aqoonyahan ee waa in ay Matricula odayga ama duudduuban, laakiin ka dib University laftiisa la wareegay waajib this. Waxa kale oo ay ahayd suurad wacan si ay u xusaan marxaladda in horumarka aqoonyahan ee ay xaflad ka mid ah gelitaanka (qalinjabinta) in fasalada kala duwan, ama digrii, xubnaha. Kuwan waxaa shirka by jidhka oo dhan sayidkooda, la Chancellor ka jimicsi awoodda ay wakiil, sida ku xigeenkiisa, Ku-xigeenka Chancellor, u yimaadeen inay ka dib sameeyo. The fasalada ah aqoonyahan noqday duwan by taxane ah oo kala duwanaansho on goonnada, Dhuunta iyo cap. Xusuusin oo ka mid ah shuruudaha iyo dhaqanka u noolaadaan maanta.
Regent Masters The, oo ahaa jirka barayay, ugu dhakhsaha badan lagu ogaaday in lagu daro madaxa a rasmi ah ay u baahan wakiillo kale in ay ku hadlaan iyo dhaqmaan iyaga u. The ugu horeysay oo ka mid ah waxay ahaayeen laba Proctors (macno ahaan wakiilada) kuwaas oo ay sanad walba loo doortay in ay ka doodaan iyaga oo wakiil la magaalada iyo masuuliyiinta kale ee ku jiifay, inay sameeyaan xisaab xir ah, si loo ilaaliyo khasnadaha iyo buugaagta, dhexdhexaad ah ee imtixaanka, iyo inuu kormeero dhammaan xafladaha kale. waajibaadka Kuwan waxaa ugu dhaqsaha badan in la wadaago by saraakiisha kale ee la doortay: Bedells, marka hore ku lifaaqan kulliyadood ka, guddoomiyay xafladaha; iyo Chaplain qaaday mas'uul ka ah khasnadaha iyo buugaagta. By qarnigii lix Registrary a diiwaan matriculations, ogolaanshaha darajooyin, iyo go'aamada ka soo baxay sayid Ninkaas, halka codkar ah oo warqado rasmi ah iyo cinwaanada qoray. Inta badan xafiisyada, kuwaas oo ku sii maanta, inkastoo mararka qaar ujeedooyin rasmi ah oo keliya.
bulshada ka mid ah xeerarka adayga loo baahan yahay sida. Si taas loo gaaro, sida dhibaatooyinka kacay, Statutes ayaa ansixiyay jidhka oo dhan ee Jaamacadda. Kuwan waxaa markii hore ma diyaarin ama degsan, laakiin waxaa uu xusay katimid ee buugaagta dhawray by Proctors ah. version ugu horreeya ee la garanayo ee go'aanda kor ku xusan waa nuqul sameeyey bartamihii qarnigii saddex iyo tobnaad ee, kuwaas oo hadda waa in Angelica Biblioteca ee Rome.
Inta badan oo ka mid ah culimada of University ahaa karaaniyaal koowaad ama kirishtaan,in amar quduuska ah ee sort qaar ka mid ah, oo filaya xirfadaha ee Church ama Civil Service (sida diblomaasiyiinta, garsoorayaasha ama saraakiishii qoyska reer boqor). Si ay iyaga ugu taageeraan inta lagu guda jiro sano ee waxbarasho ay, waxay soo fiiriyeen for fadilaad ee Kaniisadda (faa'iido ah, canonry a, xataa sharaf ah cathedral a), laakiin sida karaaniyaal amreen waxay ahaayeen at mawduuca ugu horeeyay ee masuuliyiinta maxalliga ah wacdina, in uu yahay, ee ah madaxa iyo Bishop of Ely. Ka hor dhammaadkii qarnigii shan iyo tobnaad, si kastaba ha ahaatee, ay ku xoreeyey this, iyo kuwo ka madax banaan oo dhan amar wacdina ee Pope ee marka laga reebo. Chancellor noqday garsoore ictiraafayso in uu xaq u gaar ah, maqalka dhammaan kiisaska ku lug leh anshaxa ama anshax ee culimada, oo caddaynaya ka mida cidduu doono oo dhan, kuwaas oo ku dhintay joogitaanka. Ugu ku saabsan isla muddadaas, Chancellor ayaa sidoo kale la siiyaa culimada maxkamadda cilmaani ah oo ay ku noqnoqdo karo maxkamad oo dhan kiisaska madaniga ah iyo dembiyada kuwa ku saabsan dembiyada ugu waaweyn marka laga reebo.
Crown ayaa intaa ku daray in madaxbannaanida University ee. Waxay soo bandhigay tallaabooyin si ay u ilaaliyaan culimada ka dhanka ah dhiig-miirashada by eryaa kan ka heleen suuqa iyo toll xuquuqda oo u sahlay in ay kor u sicirka cuntada, shidaalka iyo shumaca. Si taas looga hortago, University la siiyey xaq u leeyihiin inay sii wadi at sharciga ka dhanka ah burcad faa'iido suuqa, iyo si uu u dhaqan dhaqanka ee assizes, ama imtixaanka, oo kibis iyo ale by magaalada.
helitaanka ee xoogga leh waa sii waday in ay noqon il khilaaf u dhexeeya magaalada iyo goonnada (Jaamacadda) ilaa qarnigii sagaal iyo tobnaad. More si degdeg ah, waxaa la rumeysan yahay in weerarrada on hantida University ee magaalada in 1381 ayaa qayb ahaan u waxyoonay by xanaaq faragelinta this.
Haddii tani ay tahay si, weerarka ayaa la xanuunsan xukumay, tan iyo markii ay sabab u tahay baaritaan Royal ah oo wuxuu galay rabshooyin ah, University la siiyo awood ah oo loo ogol yahay Chancellor ma aha oo kaliya in dembiga la oogo faa'iido doon ah, laakiin sidoo kale kuwa miisaanka Beenaalayaal iyo tallaabooyinka, khatar caafimaadka dadweynaha by adulteration ee cuntada iyo cabitaanka, kalagoynta ee sahay biyo cusub, ama si ulakac bandhigid cudurka inta lagu guda jiro safmar ah 'cudurkii'. gacanta dheeraad ah oo ganacsatada loo ogolaaday inuu Chancellor la deeqda ah ee awood badan, dacwana sharciga dhalatey intii lagu jiray suuqyada iyo carwooyinka. vestiges ugu danbeysay ee xuquuqdaas ma baabi'i ilaa qarnigii sagaal iyo tobnaad, iyo University xajisto xilalka xataa maanta qaar xidhiidh la leh bilayska iyo licensing.
In maalmood ay horeeya, Jaamacadda jirin goobta ay u gaar ah: waxaa isku hallaysay kaniisadaha kaniisadda, gaar ahaan Great St Mary iyo St Benedict ee (ama 'Bene't ee') oo ku saabsan dhismaha ka mid ah amarada diinta, sida goobaha xafladaha ay dadweynaha. Khudbooyin, disputations iyo hoygeeda laga helay guryaha gaarka loo leeyahay, taas oo inta badan ka bedelay gacmaha ama ka baxay isticmaalka. kooxaha Soon yar ee Regent Masters, qareennada iyo fiqiga, bilaabay inuu wax dhiso ama kiraystaan ​​dhismaha weyn buu u leeyahay waxbaridda, iyo ku hoydo. A yar oo hostels ka badbaaday ilaa qarnigii lix iyo markii ay inta badan helay qeyb ka mid ah dhismaha Colleges. Si ka duwan Colleges ah, hostels lahaa hadiyadaha yar oo had iyo jeer waxaa lagu gaar ah loo leeyahay.
Dhinaca kale inta lagu jiro qarnigii afar iyo tobnaad daahay iyo ka dib, Jaamacadda waxay bilaabeen inay bartaan hantida on goobta maanta loo yaqaan Senate-House Hill, iyo in la dhiso waxay on Koox ka mid ah dhismayaasha ugu yeedhay 'Schools’ – qaar ka mid ah oo ku noolaan maanta sida 'Old’ Dugsiyada. Halkan ahaayeen qolalka cilmiga of Caqlina sare ah – dhismaha ugu horeeyay ee lagu taagay ahaa School Ilaahnimada ah – halkaas oo muxaadarooyin iyo disputations lagu qabtay, goobta cibaadaysiga, maktabadda, oo khasnaddii, la sanaaduuq iyo muniments ay. Inta badan oo ka mid ah dalka iyo dhismayaasha magaalada wuxuu weli joogay gacmaha gaarka ah, ama kuwa guryaha diinta, inkastoo laga goor dambe oo qarnigii saddex iyo tobnaad badan waxaa horey u gudbiso hay'adaha cusub ee la yiraahdo Colleges. deeq Pious bixiyo, kuwaas oo Kulliyadaha in meesha ugu horeysa loogu talogalay tiro yar oo ah ardayda heerka sare ee sharciga ama ilaahnimadiisa kuwa ku tukado lahaa nafaha lehna ay. Waxa ay ahayd ka dib in Colleges ku yaaliin ee undergraduate aad u da 'yar kaasoo markii hore lagu hoydeen hostels ama guryaha gaarka loo leeyahay.
College ugu horreeya ee ahaa St Peter ama 'Peterhouse', asaasay 1284 by Hugh Balsham, Bishop of Ely. King ayaa Hall, 1317, waxaa loogu talagalay by ay aasaasihii, Edward II, si ay u bixiyaan dagaalyahaniin in hay'adaha sare. Michaelhouse, Clare, Pembroke, Gonville Hall, Trinity Hall, gulkroppshormon Christi, King ayaa, Queens’ iyo St Catharine ayaa daba socday intii lagu jiray soo socda 100 sano. Saddex aasaaska daahay, Ciise, Masiixa iyo St John ayaa, ka soo diridda ee guryaha diinta yar ka hor 1520 iyo, sida Boqorka Hall, siiyaa culimada yar iyo sidoo kale '-ka qalin post'.
Ka hor inta dhexe ee qarnigii lix, Kulliyadaha bilaabeen inay ka qayb muhim ah in nolosha University ciyaaro. Waxay hadda u sharaxan Proctors ka xubnahooda dhexdooda muddo sanadlaha ah ee xafiiska, oo madaxana waxaa inta badan adeegay Ku-xigeenka Chancellor iyo dhakhaatiirta ka tirsan xubnaha golaha la talinta oo ugu dhaqsaha badan ahaa in loogu yeedho Senatus kharaab ah. Laga soo bilaabo qarnigii lix ilaa ku dhawaad ​​dhamaadkii labaatanaadna, Madaxa mid ka mid ah Kulliyadaha had iyo jeer lagu qabtay xafiiska-xigeenka Chancellor.
Mid ka mid ah tirooyinka muhiimka ah ee Cambridge waqtigan ahaa John Fisher, oo la israac Master of Michaelhouse, Proctor, -Xigeenka Chancellor, Chancellor (1509-35) iyo Madaxweynaha Queens '. Sida la taliye si King Henry VII hooyadii, Lady Margaret Beaufort, wuxuu ahaa ee aasaaskii Masiix iyo St John ayaa; si siman muhiimsan uu bayaan u waxyoonay abuuritaanka post ugu horeysay ka fadilnaa jaamacadda cilmiga, ee Lady Margaret Professorship ee Ilaahnimada. Waxa uu sidoo kale soo jiitay in Cambridge tiro ka mid ah culimada – gaar ahaan Erasmus ee magaalada Rotterdam – kuwaas oo ku dhiira galiyay 'barashada cusub’ ee Giriigga iyo Cibraaniga, caawiyay in ay nadiifiso jidka u bar-fiqi, wararka bar-falsafadeed oo soo saaray hagaajinta kaniisadda iyo kala diridda ee Macaabidda Yuhuud ah.
Saamaynta oo ka mid ah isbedel waxbarasho iyo diinta hore ee qarnigii la arki karaa in muuqaalka jireed ee magaalada: a College cusub weyn, Trinity, waxaa la aasaasay by Henry VIII ka labadii guri yar oo King ee Hall iyo Michaelhouse; Dr Caius ballaadhisay Gonville Hall si ay u dhow aasaas cusub, loo yaqaan Gonville and Caius College, oo degan dhow a site badan Dugsiyada Hore; Emmanuel nuugo site Dominican, Sidney Sussex in Franciscans ah, iyo reer Magdala nuugo guriga Benedictine hore ee waxbarashada loo yaqaan Buckingham College. Kuwani aasaaska cusub ayaa daneeya waxbarashada dadka waayo wadaadnimada kiniisadda qaranka, laakiin waxay, iyo Trinity gaar ahaan, soo jiidatay markii ugu horeysay tiro badan oo ardayda ku jiifay.
Cabbirka University rasmiga ah aad buu u badiyey, laakiin tirada guud ee ragga dhallinyarada ah ee magaalada ka mid ah kuwa si Cambridge yimid, ma si ka badan isagoo qasdigiisu yahay qalin-jabinta ugu danbeyn, laakiin in ay ka macaashaan xiriirada aan rasmi ahayn iyo hawlaha manhajka dheeraadka ah ee, iyo kuwa ka dibna tegey on muddo sannad ah ama si ay u Inn ah Maxkamadda ee London. Kuwani waxay ardayda ku jiifay, addoommadooda, iyo dhar tolida ah, dayrka-sayid, tennis-maxkamadda-dhawraya, fardaha-sayid oo la mid ah, kuwaas oo u yimid in uu tarin iyaga ka, cadaadis aad u weyn oo ku saabsan hoy iyo cunto-sahayda magaalada ku nool oo abuuray dhibaatooyin halis ah oo si dadweynaha. Tani waxa ay ahayd muddo markii xiriirka magaalada-goonnada ayaa aad u ba'an dhaawac.
qof ayaa la beddelo oo jidhka ardayga ka muuqataa manhajka. Henry VIII ayaa soo saaray taxane ah oo reebitaan oo si University ee 1536 xakamaynayaan ayaa u Kulliyadda Law Canon oo diidaya waxbarasho ee falsafada maadadeed. Baadhitaanka ayaa sharciga xeerkoodu diiday, iyo Classics Giriigga iyo Latin, xisaabta iyo kitaabiga waxbarashada haatan u yimaadeen inay ka iib-.
The isbedel ku University ayaa la sii kordhaa by waxqabadyada Royal xigta; ciqaab ah ayaa ka walwalsan la jaamacadaha sida soo saarayaasha oo ka mid ah hogaamiyayaasha mustaqbalka kiniisadda edeb, oo qaynuunnadii 1570 hubiyaa this. Waxay ku urursan ma xujo, sidii hore, ee Masters Regent iyo Proctors ah, laakiin ku-xigeenka Chancellor iyo Madaxda ugu.
hibeynta The by Henry VIII shan professorships, ka professorships Regius of ilaahnimadiisa, Hebrew, Greek, physic iyo sharciga madaniga ah, nuuxnuuxsaday isbeddel ah ee hababka baridda iyo tusaale ah ee deeq-bixiyeyaal gaar. The isbedelka qaranka ee 1640 si ay u 1660, iyo in shahaado ka yar 1688-89, keentay in rabshooyin in ballamaha iyo anshaxa, laakiin saamaynta Royal in qaab reer amar Council og,, iyo codsiyada digrii magacaabay maxkamadda (degrees igmaday) sii ilaa qarnigii hore siddeed iyo tobnaad.
Daabacaadda la sameeyo in Cambridge ee 1520s iyo charter Royal ah 1534 Jaamacadda siiyey awood u leeyahay inuu magacaabo (ama liisan) saddex madbacadaha (stationers) oo ahaa in ay daabacdo oo naadiya shuqullada taas oo la ansixiyey. konton sannadood kale ahaayeen noqotay hor mudnaan this waxaa si joogto ah u dhaqmaa iyo waxa ugu danbeyn u hormaray Press Jaamacadda. From 1584, Qoraalkan joogto ah bilaabay hoos mudnaanta University iyo ka badan ama ka yar si tartiib ah u sii waday, laakiin ma uusan gaaro ciidamo dhab ah ilaa habeynta Richard Bentley ee tobanka sano ee la soo dhaafay qarnigii toddoba bixiyo dhismaha cusub iyo noocyada. Horumarkan waxaa loo ogol yahay Press University ee koorsada ay sabab u tahay ka faa'ideysan si buuxda haysto ee daabacaadda Bible taas oo lala wadaago Oxford iyo 'Daabacado King ee', iyo in ay soo saaraan durdur joogta shuqulladiisa lagama maarmaan ah in horumarinta waxbarashada ay. The Cambridge University Press sii wadaan in ay maanta mid ka mid ah daabacayaasha tacliinta ugu da'da weyn oo ugu weyn adduunka.
Shaqada xisaabeed ee qarnigii toddoba ayaa samaysay ay ubax buuxa ee mustaqbalkiisa ciyaareed ee Sir Isaac Newton (1643-1727), kuwaas oo la taabacsan eryadeen baaritaan cilmiyaysan oo dhan cayn kasta. Tani waxay ka muuqataa samaynta degdeg ah by University iyo deeq-bixiyeyaal gaar ah taxane ah oo loogu talagalay professorships xisaabta (Lucasian ah), chemistry, xiddigaha (Plumian ah), anatomy, cilmi barasho dhir, cilmi dhul (Woodwardian ah), xiddigaha iyo joomatariga (Lowndean ah), iyo falsafada tijaabo. Professor ayaa ku dhiirri-bixinta qalabka waxbaridda gudahood Jaamacadda: tani waa markii ugu markii Botanic Garden iyo Museum Woodwardian ee Fossils ayaa waxaa la aasaasay iyada oo deeqo gaar ah, iyo Observatory ah waxaa kor loogu dhigay by Trinity College. Barbar hawshan sayniska, laba professorships of Carabi (Sir Thomas Adams oo Rabbiga arrimha ee), moral falsafada (Knightbridge ah), music, taariikhda casriga ah (Regius), ilaahnimadiisa (Norrisian) iyo sharciga (Downing) waxaa la aasaasay si ay ula kulmaan baahida kale.
The disputations iyo opponencies ee la soo dhaafay ayaa loo habeeyey, si ay waxbarashada cusub. Kuwa dhamaystirka marxaladaha hore ee qalin-jabinta ayaa lagu diyaarin si ah mudnaan, kaas oo lagu dhawaaqay Ash Wednesday. Aayado madadaalo, mararka qaarkood garneel, waxaa lagu akhriyey xaflad qalin by BA ka tirsan (ama 'bachelor jir') fadhiya, sida nacas u shati, on saxaro ah saddex lug ama Maala. In waqtiga, liiska qalin-jabinta ku yimid in lagu daabaco dambe ee aayadahan Tripos, oo noqday kuwa loo yaqaan liiska Tripos ah.
Inkastoo bixinta ee cilmiga dabiiciga ah iyo farshaxanka, ka qarnigii 17-, xisaabta u yimaadeen inay xukumaan waxbarashada ee Cambridge, iyo ugu danbeyn 'Tripos ah’ u yimaadeen inay ka dhigan imtixaanka xisaabta. Tani waxaa loo sameeyay in ka-Senate House, halkaas oo musharaxiinta u badan tahay inay si fiican u samayn qaaday waraaqaha gaarka ah ee 'dhibaatooyin', marka hore loo Yeedhiyaa iyaga by Moderators laakiin by 1800 muuqashada sida warqad daabacan.
Maktabadda Jaamacadda ayaa la ballaariyey iyada oo inta kale ee University lagu jiro qarnigii toddoba iyo ka dib, iyo ka dib hadiyadda by George I oo ka mid ah qoraallada iyo buugaagta ee Bishop John Moore, waxaa outgrew meelood ay asalka ah ee Dugsiyada Hore. Qorshayaasha mar hore la soo jeediyey ee dhismaha of a Senate-House hore ee Dugsiyada Hore, oo taas waxaa ugu dambeyntii la dhameeyey 1730. Inta u dhaxaysa taariikhda iyo 1758 taxane ah oo ka bedelida iyo qalabka si ay u dhismayaasha qadiimka ah la siiyaa meel iyo rakiban qurxoon for Maktabadda, kuwaas oo caan ka sawiro Rowlandson ee: badan oo ka mid ah xaaladaha ku noolaadaan Library joogo Jaamacadda.
Lagu daro manhajka caadiga ah xisaabta ayaa kaliya si tartiib tartiib ah u sameeyey: baaritaan ah LLB ee sharciga madaniga muuqday ugu horeysay ee 1816, classical Tripos a bilaabay in 1824 iyo, ka dib 1843, ordinands qaadan kartaa baaritaan iskaa wax u qabso ee fiqiga taas oo ahayd si ay u horumariyaan galay fiqi ahaaneed Tripos a.
Isbeddelladan bilaabay inta lagu guda jiro waqti ay maamulka dhexe ee jaamacadda xoogaystay iyo kordhiyay by taxane ah oo dib u habaynta yar oo jiray si ay u noqon asaasiga ah inuu isbedel mustaqbalka. Statutes The, tusaale ahaan, ahaayeen markii ugu horeysay soo saaray ee version a daabacay 1785, iyo nidaamka guddiyada joogtada ah ama ku meel gaar ah (kooxaha sida caadiga ah loo yaqaan) balaariyay si ay u daboosho kormeerka ee guryaha (oo ku dedaalaysaa oo ka mid ah professorships cusub ayaa si weyn u kordhiyay), iyo sidoo kale dhismayaasha iyo hay'adaha sida Garden Botanic ah, Maktabadda iyo Saxaafadda.
Inkasta oo horumarkan, waxaa jiray qeybtii hore ee qarnigii sagaal iyo call a sii isbedel iyo dib u habaynta ee Jaamacadda, taas oo qayb ka muuqataa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka oo dhan. doorashada sida Chancellor of Prince Albert Consort Prince ee 1847 waa calaamad muujinaysa xooggii dhaqdhaqaaqa dibuhabaynta, iyo in 1850 Guddiga Royal a ayaa loo magacaabay inay wax ka weyddiin galay labada jaamacadood hore ee Oxford iyo Cambridge. Warbixinta ayaa Commission ee keentay in soosaarid of Statutes cusub ee Cambridge ee Sharciga Jaamacadda Cambridge ee 1856. Qaynuunnadan marar badan dib tan iyo markii ay markii ugu horeysay, laakiinse wax qaab leh ee dawladda, taas oo ay soo bixitaankii uu sida qaabka a. Awoodda kama dambaysta ah ee University waxay ahayd markii ugu horraysay ee Senate-, jidhka oo dhan qalin, wada jir ah ula Chancellor ah, -Xigeenka Chancellor, iyo dhakhaatiirta.
Dhammaan awoodaha muhiimka ah ee jidhka taas yimid Wakhtiga loogu dhaqmaa kuwa xubnihiisa haya jagooyinka rasmiga ah ee jaamacadda ama Kulliyadaha (Golaha Regent ah), kuwaas oo ka bacdi dooranayaa qayb ka mid ah xubnaha jidhka fulinta, Golaha. Manhajka iyo content ee imtixaanka ahaayeen mas'uul ka ah jirka kale loo doortay, Guddiga Guud ee kulliyadaha ah (kaas oo bilaabay in 1882), halka Board Financial (hadda Guddiga Maaliyadda ee Golaha) macaamilooday xisaabaadka iyo maamulka ee xaafadda University ee. Guddiyada ama loox daneeya cilmiga nidaamo shaqsi hormaray kulliyadood nidaamsan gudahood inta lagu guda jiro sano ee inter-dagaal. Kulliyadda kasta wuxuu leeyahay guddiga guddiga maamul iyo shahaado gaar ah.
The sal-dhigida iyo baaritaan waxbarashada cusub – dhismaha qayb dul xoog hore Cambridge ee xisaabta – siyaadinay aad si degdeg ah ka dib markii Guddiga Royal ee 1850 ayaa sheegay. The cilmiga dabiiciga ah iyo cilmiga moral (hadda falsafada) Triposes ayaa ansixiyey sida ugu 1851, iyo ka hor 1900 Triposes sharciga, taariikhda, fiqiga, luuqado Indian, Semitic (ka dib bariga) luqadood, Dr Makumbe oo casri ah (Yurub) luqadood, iyo cilmiga farsamada (injineernimada ka dib) waxaa kulligood ka wada aasaasay. In la horumariyo, kuwaas oo ay laamo cusub ee barashada tiro ka mid ah professorships cusub ama dib u qaabayn ayaa waxaa la aasaasay by University iyo lehna gaarka ah, horeyn isagoo Disney Professorship ee arkiyoologiga in 1851.
Tirada posts kale aasaasay cilmiga hadhay yar, iyo waxbaridda ugu undergraduate la sameeyey by macalimiinta, magacaabay oo ay bixisay Colleges ah, ama tababarayaasha gaarka ah. Sida tirada ardayda koray intii lagu jiray qeybtii ugu danbeysay ee qarnigii (matriculations kor uga 441 in 1850 si ay u 1,191 in 1910), hoy u badan ayaa lagu daray Colleges jira, saddex hay'adaha cusub muuqday intii lagu jiray qarnigii (Downing, Selwyn iyo St Edmund ee), iyo tiro ka mid ah isku day lagu sameeyey si ay u bixiyaan hostels non-Collegiate cheap kadambeeya ee ardayda saboolka. Inta badan hostels, kuwaas oo uu la waayay ka hor 1900 (dhismaha ka mid ah, loo yaqaan Cavendish College, ayaa hadda degan Homerton), laakiin a bulshada cusub non-Collegiate wareegay shaqadooda iyo ka dib noqday Fitzwilliam College.
Ilaha daraasadda of farshaxanka, naqshadaha iyo arkiyoologiga ayaa la siiyaa, hoos doonista Sir Richard Fitzwilliam, by abuuritaanka matxafka oo magiciisa waxbay ushafeeci idanka. An ka sii ballaaran oo isdaba joog ah goobta waxaa ku yaaliin on goobta jir ah Garden Botanic ah oo u dhaqaaqay Hills Road, tago meesha free a badan ka dambeeya Free School Lane ee goobta Matxafka Cusub. Boggan wuxuu u yimid inuu guri Laboratory Cavendish ee physics tijaabo, iyo sidoo kale waaxaha daawada, chemistry, cilmi barasho xayawaan, anatomy, iyo injineernimada. Dhanka kale guud ahaan wadada qaar ka mid ah dhulka dheeraadka ah asal ahaan ka heleen waayo Downing College laga iibiyay University iyo bixiyo oo ku meel Downing Site for laboratories iyo matxafyada, waayo cilmi barasho dhir, cilmi dhul, beeraha, jirka iyo arkiyoologiga iyo cilmiga aadanaha, iyo dugsiga sharciga ah. Maktabadda Jaamacadda, xooga ballaadhisay on the site Old Dugsiyada inta lagu jiro qarnigii sagaal iyo tobnaad, outgrew ay guriga asalka iyo guuray 1935 in dhismayaasha qurxoon cusub galbeed ee Cam River la gargaarka ee benefaction aad u la taaban karo ka soo Foundation Rockefeller ah.
'Muxaadarooyin Extension’ in xarumaha gobolka ahaayeen feature muhiim ah oo hawlaha University goor dambe oo qarnigii sagaal iyo tobnaad. Waxay inta badan ayaa la xiriira isku day si ay u bixiyaan cilmiga xirfadeed iyo baaritaanka gabdhaha iyada oo baaritaan maxaliga ah ee dugsiyada bixiya University ee lala Oxford. Koorsooyinka Tababarka macalimiinta qalin lab bilaabay in Cambridge ee badan waqti isku mid ah, laakiin laga yaabee saamayn ugu xeel dheer dhaqdhaqaaqa ahaa abuuritaanka at Cambridge laba Colleges loogu tala galay dumarka ardayda (Girton in 1869 iyo Newnham in 1872). From hore oo kale, kuwaas oo Kulliyadaha loogu talagalay si ay u diyaariyaan ardayda ay Tripos ah, iyo dumarka marka hore ahaayeen dhab ahaantii baarayaa 1882. Isku dayo in dumarka sameeyaan xubnaha ka buuxa University ee ku celcelis adkaaday ilaa 1947. Laga soo bilaabo 1860, Kulliyadaha si tartiib ah ayaa bilaabay in la oggalaado oo waxmatarayaal ah si ay u guursadaan. Tani waxay saamayn qoto dheer ku mujtamaca Cambridge iyo dhiismeedka ee magaalada marka guryaha yimid loo dhisayo meel qolooyinka cusub. A ardayda sare yar muuqday Jaamacadda, gaar ahaan laboratories ah, in horrantii qarnigii labaatanaad, laakiin darajo sarre, khusuusan PhD ah, bilaabatay gaabis ah ka dib markii ay sal-dhigida ee 1921.
cayaaraha qorsheeysan ay u yimaadeen inay u ciyaaraan qayb caan ah ee nolosha ka mid ah Kulliyadaha iyo University ka dib 1851. doon-tartanka u dhexeeya Oxford iyo Cambridge iyo kulan cricket inter-jaamacad mar hore bilaabay sida ugu 1827, oo waxay u noqotay dhacdooyinka sannadlaha ah ee 1839. Dhanka kale, kooxaha doon, ururada kale ee ciyaaraha fudud iyo tartamada inter-Collegiate (Lents iyo Mays – loo magacaabay ka dib markii la eego ay ka dhaceen – iyo Cuppers) noqday feature a si fiican u habaysan nolosha hoos-graduate. Proctors ayaa sii, in lala saraakiisha College, inuu kormeero si dadweynaha iyo u ilaaliyaan anshaxa iyo waa in la ogaadaa in ilaa 1970 saarto ayaa xirto wadooyinka ka dib markii gudcur by dhammaan xubnaha hoose, iyo Kulliyadaha iyo sidoo kale xiray irdaha ay ka hor saqdii dhexe.
In dagaalkii koowaad ee aduunka (1914-19), 13,878 xubno ka tirsan Jaamacadda adeegi jireen iyo 2,470 ayaa lagu dilay. Teaching, iyo lacagta ah waxay kasbatay, aheyd ku dhawaad ​​joogsiga iyo dhibaatooyin dhaqaale oo aad u daran raaceen. Taa awgeed University ugu horeysay heshay taageero gobolka nidaamsan ee 1919, shuruud baaritaan dheeraad ah khayraadka iyo urur ay, iyo Guddiga Royal magacaaban ee 1920 talinayaa in Jaamacadda (laakiin ma Colleges ah) waa in ay helaan deeq sanadlaha ah, iyo in la habayn waa in si ay u la wareegaan masuuliyadda muxaadarooyin iyo cilmiga wax ku ool ah. Kulliyadaha The ceshan gacanta waxbaridda gaarka ah ee ardayda iyo qeybinta this mas'uuliyad socota illaa maanta.
Xilligan waxa uu arkay heerka la dedejiyo ee horumarinta ee ku dhow kasta jihada. sumcad ee saynisyahano Cambridge mar hore la aasaasay qarnigii sagaal iyo dabayaaqadii by Karaaniga Maxwell iyo Darwins dhexdooda kuwa kale oo markaas ka dib waxaa lagu hayo by J. J. Thomson, Sayidow Rayleigh iyo Rabbi Rutherford. Work sameeyey ardayda iyo jaalayaashooda inta lagu jiro dagaalkii labaad ee adduunka aad buu u badiyey sumcad iyo tiro badan oo ardayda ka welwelina si ay u isticmaalaan laboratories ah, awelna loola University iyo in tirada sii kordhaysa ee hay'adaha dawladda oo maal-aasaasay magaalada (kaas oo u kiraysnaa sida magaalo ku taal 1951). waaxaha University iyo machadyada cilmi-baarista ah ayaa la aasaasay sida meelaha cusub ee waxbarasho horumarsan, oo waxaa iyaga la koorsooyin cusub waxbaridda.
The 1950 iyo 1960 arkay ballaarinta aan horay loo arag oo ah hoyga cilmiga University ee. Qaar ka mid ah dhismeyaasha wasaaradda iyo awood ka weyn ayaa la bedelay – tusaale ahaan, kuwa Chemistry iyo Engineering – iyo Caqlina kordhaya fanka helay hoy joogto ah markii ugu horeysay, gaar ahaan gudaha dhismaha dhismayaasha on Avenue Sidgwick ah Site. Horumarinta ee isbitaalka weyn cusub ee gobolka guud ahaan koonfurta magaalada, ugu danbeyn bedelay Hospital Addenbrooke qadiimiga ee bartamaha magaalada, siiyaa xuduntii for tiro balaadhan oo ah waaxaha caafimaad la xiriira iyo machadyada, ay ka mid yihiin Dugsiga cusub ee Medicine Clinical. Baahida loo qabo meel ka badan waxaa laga yaabaa in laga heli karo goobaha dhexe hawadu ku keentay in firdhinta ee waaxaha kale, gaar ahaan Cavendish Laboratory in ay goobta u waasac galbeed ee Cambridge ee 1970. galbeed The Cambridge fidinta socota illaa maanta, iyo meesha hadda hoy u xarumaha badan oo ay ka mid yihiin Laboratory Computer iyo Xarunta Nanoscience.
hawlaha bulshada iyo dhaqanka aan la dayacay, iyo in muddo this xarun joogto bulshada ee ardayda ka qalin iyo shaqaalaha – Xarunta Jaamacadda – waxaa la aasaasay la lacagaha ay bixiyaan Foundation Wolfson ah, dugsiga iyo riwaayad hall Ujeedada-dhisay music ah waxaa la dhisay, mar kale qayb ka nimcooyinka, Maktabadda Jaamacadda waxaa mar kale kordhiyay, tahay ururinta casriga ah ee kidhligii ee Yard ayaa la helay iyo balaartay, iyo England ayaa ugu da'da weyn playhouse University, ADC ee, furay by riwaayado Club ee Hiwaayadda ee 1855, waxaa kirayso University iyo dayac tiray sida xarunta a for riwaayadaha undergraduate. horumar noocan oo kale ah, kuwaas oo sida ay muujiyeen wacyiga sii kordhaysa oo ka mid ah waajibaadka guud ee Jaamacadda, labada xubnaha u gaar ah oo ay bulshada ugu waaweyn.
More si toos ah oo la xiriira howlaha asaasiga ah ay ahayd horumarinta magacaabay 'ah Dhacdooyinka Cambridge', weynna u kobcay iyo guul of warshadaha sayniska ku salaysan oo magaaladii ku wareegsan, inta ay ku filnayn, ka cilmi ah sameeyay in laboratories University. Waxay muhim in nidaamka this ahaa abuuritaanka Science Cambridge ee Park by Trinity College, abuurnimo ah oo uu haatan ku koray si weyn ee size iyo wixii la raacay by horumar kale oo la mid ah. gaar Industrial Office Liaison The University ee bilaabay in 1970 oo taageero ka Foundation Wolfson ah, waxaana uu haatan u hormaray Xafiiska Cilmi-ka.
Dhinaca kale tirada undergraduate sii kordhay ka dib markii dagaalka by ogolaado in ay xubin buuxda ka 1947 haweenka ardayda, by aasaaskii haweenka saddexaad College, New Hall (1954, hadda Murray Edwards College), iyo sidoo kale aasaaskii Churchill (1960) iyo Robinson (1977). tallaabooyinka kacaan More loo qaaday 1960. Afar Colleges cusub ayaa waxaa la aasaasay si ay u bixiyaan garayso qaar ka mid ah tirada sii kordhaysa ee shaqaalaha cilmiga iyo cilmi baarista, sidoo kale meelo badan ee ardayda cilmi (Darwin, Wolfson, Clare Hall iyo Lucy Cavendish). Qaar ka mid ah aasaaska ka weyn hore ugu duub xiran Jaamacadda – Hughes Hall, St Edmund iyo Homerton – ayaa loo aqoonsaday Colleges. Raggii ka weyn ee Kulliyadaha hadda bilaabay inuu galiyo dumarka ardayda iyo magacaabi dumarka oo waxmatarayaal ah. Haddaba 'co-degaan’ waa caadi, laakiin saddex Colleges galiyo dumarka ardayda oo kaliya – Newnham, New Hall (hadda Murray Edwards College), iyo Lucy Cavendish.
In 2009, Jaamacadda Cambridge gaaray guul gaar ah - 800 sano ee dadka, fikradaha iyo guulaha in ay sii wadaan inay u beddesho oo dunida ka faa'iideysan. Dabbaaldegidda ugu fiican taariikhda hodanka ah Cambridge iyo ku hayaa mustaqbalka, Jaamacadda ka muuqataa on guulihii toban kun iyo fikradaha dunida-beddelo ku dhashay derbiyadeeda gudahood, ka abuuritaanka asaasiyaadka physics in helitaanka qaab-dhismeedka DNA; ka fikir is badalka ah faylosuufiinta weyn Cambridge, gabayaaga iyo fanaaniinta; si uu shuqulka groundbreaking badan oo ku guuleysatay in ay Nobel Prize.
Guuradii 800aad waxaa lagu calaamadeeyay la noocyo kala duwan oo dhacdooyin iyo mashaariicda sanadka oo dhan. Waxaan ku casuumay shaqaalaha, Qalinjabiyeyaasha, ardayda, bulshada deegaanka iyo jaamacadaha la shaqayn jiray si ay ugu dabaal nala inta lagu guda jiro 2009.
Furitaanka Guux ah dhacdo sanadka soo jiitay in ka badan 10,000 Kooxda martida aheyd inay dhexe Cambridge si ay u daawadaan lightshow a bespoke - horeysay ah ee Cambridge. Waxaa intaas dheer in this, jidadka Cambridge waxaa lagu sharraxay calammo sita oo muujinayay sawirka iyo xulasho oo timir ah ka University ee, kale ugu horeysay ee magaalada.
By waqtiga Summer Garden xisbiga ee July, tareen ayaa loo magacaabay by Chancellor ee lagu xusayey sanadguurada, lightshow ayaa la soo noqnoqda ee Shiinaha, Festival Science ayaa u dabaal 800 sano ee sayniska iyo boqolaal ka mid ah jaamacadaha adduunka oo dhan, iyo sidoo kale carruurta dugsiga maxalliga ah, ahaayeen Waraaqaha qoraal mashquul in Mustaqbalka. Xisbiga Garden wuxuu soo jiitay in ka badan 9,000 xubno ka mid ah shaqaalaha iyo qoysaskooda.
Afar maalmood ka dib, riwaayad Cambridge ee riwaayado BBC muuqan composers Cambridge, muusikada tuma iyo kuwii gabayaaga ahaa ka 16 Kulliyadaha lagu qabtay joogitaanka HRH The Prince of Wales. By dayrta, dhowr dhacdooyin cusub dhacay. ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa: play a si gaar ah u wakiishay sameeya carruurta dugsiga maxalliga ah xaq u 0-800 in 60 Minutes iyo booqasho ka HM The Queen, inta lagu guda jiro taas oo iyadu shirka Regius ku Professorship cusub oo cilmi barasho dhir. Quentin Blake, muujiye caanka ah oo u laabo, gacan ka brand taxane ah oo cusub oo shuqullada soo bandhigtay tirooyinka si fiican u yaqaan ee la soo dhaafay ka tirsan jaamacadda ee. Bishii December, Dhismaha Empire State ayaa la shiday ilaa habeen buluug Cambridge.
On 18 January 2010, mid ka mid sax ah ka dhacdo hore sano on, Sanadguurada la soo gabagabeeyay iyadoo lightshow weyn bandhigaya cilmi University hadda. show The daro King ee, Clare, iyo Gonville and Caius Colleges galay wadada lagu socdo in bilaabay at Senate House oo soo jiidatay ugu yaraan a 20,000 dadka.
Laba qaybood oo waaweyn oo hawl yar oo baaxad dhafnaa sanadka. Midkii kowaad wuxuu ahaa 2009 Fund, kaas oo ahaa gaariga weyn ee 42 "Hoose-up" dhacdooyinka iskaashi. Inta badan oo ka mid ah ay ahaayeen arday keentay; ay ka mid music qasiidooyinka in chapels, joornaalada print cusub iyo websites waxbarasho, masraxa cusub iyo baabuur bey'ada tartanka qoraxda ku shaqeeya in tartanka Australia.
strand labaad socda ilaa sanadka u ahaa Fikradaha Cambridge, taxane ah oo maqal iyo video Nayroobi muuqan aqoonyahano Cambridge ka qabashada dhibaatooyinka ugu waaweyn ee maanta. Tani waxa ay ahayd oo kaliya hal arrin oo ah joogitaanka weyn cusub ee warbaahinta cusub, oo ay ku jiraan YouTube, horumariyo si gaar ah loogu talagalay sanadguurada 800aad laakiin sii sida dhaxalgal ah mustaqbalka.
Waxa intaa dheer in guuradii 800aad, Cambridge ayaa sidoo kale marti ah Festival Darwin ee, at kaas oo noloshii iyo shaqadii of Charles Darwin loo dabaal sida 2009 calaamadeeyay 200 sano tan iyo markii uu ku dhashay iyo 150 sano tan iyo daabaco 'On the Asalkii Species'. Bandhigu wuxuu soo, kaas oo ka dhacay xagaaga, wadahadalo featured, doodaha, qaab, seminaaro, bandhigyo iyo tours.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan siyaabaha ay guuradii 800aad u dabaal soo dhaafay, hadda iyo mustaqbalka ee Jaamacadda, fadlan eeg menu oo ku saabsan dhinaca bidix ah.
Fadlan eeg warbixinta kama dambaysta ah ee Guddiga 800aad guuradii Steering hoose.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Cambridge ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Cambridge rasmiga ah Facebook
University of Cambridge dib u eegista
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Cambridge.